Jaangooyaha nalka: samee kanaga si aad uhesho nalkaaga | Qalabka bilaashka ah
Jaangooyaha nalka: samee kanaga si aad uhesho iftiinkaaga
Waqtigaan la joogo waxaa jira guluubyo fara badan oo caqli badan oo laga xakameyn karo barnaamijka moobiilka ama iyada oo loo marayo kalkaaliyeyaal qaas ah iyadoo loo marayo amarrada codka. Guriga Smart, ama guriga caqliga badan, ayaa ku jira moodel, oo haddii aad rabto inaad bilowdo barashada sida nidaamyadan u shaqeeyaan, waad iskaa u sameysan kartaa diiran guriga
Iyada oo aad awoodid xakamaynta xoojinta nalka ama guluubka si aad u abuurto jawiga aad doorbideyso. Xoog badan marka aad wax akhrineyso, waxbarto, iwm.
1 Waa maxay dimmer ama dimmer?
1.2 Qalabka dhismaha
2 Hirgelinta Arduino
Waa maxay dimmer ama dimmer?
Un diiran, ama xoojinta iftiinka, waa aalad xakamayn karta danab ku saleysan xakameeyayaasha danab ama seddex geesood. Tani waxay wax ka bedeshaa danabyada gaara guluubka xooggeeda ayaa is bedbedeli doona iyadoo kuxiran danab keena. Tusaale ahaan, xaaladdan waxaan ku tusi doonaa jaangooye ay ahayd inaan muddo dheer ka hor isu soo uruuriyo mashruuc ku saabsan koorsada korantada.
Way fududahay, raqiis tahay, waana loo isticmaali karaa nal kasta oo caadi ah. Si loo abuuro, waa kuwan tilmaamaha ...
Waxaad ubaahantahay mashruucan DIY waa inaad lahaato xirfadaha sameeyaha iyo qalabka fududahay in la helo sida:
Xarig Bifilar naxaas ah qalabka korontada.
Xadhig si loogu xiro wado kasta si loo helo koronto.
Fiyuus fiyuus ah ee 5A, oo uu wakiil ka yahay qorshaha. Ikhtiyaar ahaan, waxaad isticmaali kartaa fiyuus hayaha, si aad ugu fududaato inaad beddesho fiyuuska, in kasta oo si toos ah loo iibin karo.
Sanduuqa daboolka o gundhigid. Waxaad sidoo kale daabacan kartaa 3D haddii aad leedahay daabacad, ama aad ka samaysan karto alwaax, iwm. Waxay u adeegi doontaa sidii taageero iyo dahaadh wareegga.
Guddiga wareega daabacan si loogu duubo wareegga saxda ah ama sabuurad.
Triac BT137 y kuleylka kuleylka ee triac.
Diac BR100 ama u dhigma.
2x 39nF / 250v polyester capacitors (C1 iyo C4). Iyo 2x 22nF / 250v polyester capacitors kale (C2 iyo C3).
Qiyaasta toosan Wax alaab ah lama helin. (P1), wuxuu u adeegi doonaa inuu yahay hawl wade si uu awood ugu yeesho inuu xakameeyo xoojinta gacanta.
Iska caabinta 12KΩ 0,5w (R1) iyo iska caabin kale oo ka mid ah 100Ω 0,5w (R2).
Ku duub coil leh ferrite (L).
Tab Splice in lagu xiro wax soo saarka (S) iyo gelinta (E).
Birta wax lagu dhejiyo (haddii aadan isticmaali doonin sabuuradda).
Iyada oo intaas oo dhan, waa inaad soo saartaa waxyaabaha soo socda wareegga korantada:
Marka wax waliba isku xirmaan, natiijada waa inay noqotaa wax sidan oo kale ah:
Iyo shaqeynaya waa inaad heshaa natiijada soo socota:
Hada hadaad rabto keydi qaybaha y isticmaal arduino si aad u sameyso cabirka, markaa sidoo kale waad sameyn kartaa si fudud. Xaqiiqdii, way iibiyaan Qalabka moduleynta LED-ka ee AC illaa 240V sidan oo kale, si aan wax kuugu fududeeyo. Qaab dhismeedkeedu waa mid fudud ...
Waxaa sidoo kale jira mashruucyo fudud oo lagu xakameynayo xoojinta DC LEDs, in kastoo taasi aysan ahayn waxa aan halkaan ka raadineyno ...
para ka dhig doog, ama ka dhig, la socda Arduino, waxaad ku samayn kartaa siyaabo badan. Xitaa waxaad u isticmaali kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabihii ka soo baxay mashruucii hore si aad u abuurto mashruucan:
Waxaad isticmaali kartaa module ah:
Xitaa waad isticmaali kartaa Qalabka WiFi si loo abuuro iftiin caqli badan ...
Sida aad arki karto, fursadaha aad ayey u badan yihiin ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Jaangooyaha nalka: samee kanaga si aad uhesho iftiinkaaga
ATECC608: moduleka amniga ee Raspberry Pi
DS3231: saacada dhabta iyo kaalandarka Arduino-kaaga